युटुबर भाग्य न्यौपाने १ वर्ष देखि गायब भएका घरजम गरेर पत्निसँग रमाइलो गरिरहेको अवस्थामा फेला परे, को हुन् ति भाग्यमानी युवती जसले भाग्यकी पत्नि बन्ने सौभाग्य पाइन् ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। १ वर्ष देखि गायब भएका युटुबर भाग्य न्यौपाने घरजम गरेर पत्निसँग रमाइलो गरिरहेको अवस्थामा फेला परे, को हुन् ति भाग्यमानी युवती जसले भाग्यकी पत्नि बन्ने सौभाग्य पाइन् ? **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
प्रदेश लोकसेवा आयोगको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा तथा निजामती ऐन पारित गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश निजामती ऐनको टुङ्गो नलाग्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालय लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालय दरबन्दीअनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।